CD write problem [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » CD write problem [Problem]
1 CD write problem [Problem] on 14th May 2010, 1:28 pm
CD write ရင် ဗျာ memory က အပြည့်ကြီးပဲ ပြောနေတယ် ဗိုင်းရက်စ်ကိုက်တယ်လို့ထင်တယ်. . သိတဲ့သူများအမြန်လေးကူညီပေးကြပါအုံးနော် . .
Last edited by solakoko on 14th May 2010, 4:22 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Tag)
2 Re: CD write problem [Problem] on 14th May 2010, 6:23 pm
memory က အပြည့်ကြီးပဲပြောတယ်ဆိုတာ ဘာလဲဟင် ? Memory မလောက်တာလား?
3 Re: CD write problem [Problem] on 15th May 2010, 12:57 pm
မဟုတ်ဘူးဗျ memory ကလည်း နည်းတယ် cd တစ်ချပ်မှာ 700 MB ပါတယ်လေ . .
ကျွန်တော် ရိုက်မယ့် data က 200 MB လောက်ပဲရှိတယ် .. . process failed ဆိုပြီးလည်း ပြောတယ် Nero 8.0 စက်မှာတင်ထားတယ်ဗျာ . . ကူညီကျပါအုံး ရွှေညီအစ်ကိုတို့ရေ . . .
4 Re: CD write problem [Problem] on 15th May 2010, 5:43 pm
ဒါမှမဟုတ် Nero ရဲ့ Version မြင့်နေလို့လားမသိဘူး။ Version နိမ့်တာနဲ့ ပြောင်းပြီး Burn ကြည့်ပါလား။
5 Re: CD write problem [Problem] on 15th May 2010, 8:37 pm
ကျနော် လဲ တွေ့ကြုံခဲ့ဘူး ပါတယ်.... Application error လို့ထင်တယ်.... တင်ထားတဲ့ software ကို repair (or) reinstall ပြန်လုပ်ရင် ကောင်းသွားရော... ကျနော်ဖြစ်တုန်းက ပြောတာပါ.... စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး
6 Re: CD write problem [Problem] on 17th May 2010, 12:53 pm
ကျွန်တော် Nero 6.0 version လည်းပြောင်းသုံးပီးသွားပီဗျာ အစဉ်မပြေဘူး . .
ကျွန်တော် CD Burn တဲ့စက်က memory 1 GB ရှိတယ် ဗျာ . processor က Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @1.80GHz ရှိတယ်ဗျာ Harddisk က 80 GB . .
software ပြောင်းသုံးလည်း အစဉ်မပြေဘူးဗျာ . . ကူညီပေးကြပါအုံး . . .မည်သည့် data ကိုမဆို
process failed ဆိုပြီးပဲ ပြနေတယ် အခွေကိုလည်း အသစ်တွေပဲသုံးတာပါဗျာ . . [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: CD write problem [Problem] on 17th May 2010, 1:56 pm
ခွေကူးတဲ့နှုန်းကို ဘယ်လောက်ထားပြီးကူးတာလဲဟင်... VCD ဆိုရင် 24 , 32 လောက်နဲ့ကူးမှအဆင်ပြေတတ်တယ်... နောက်ပြီး writer က lens များကျနေလို့လားမသိဘူး... တကယ်ဆိုခွေကူးတာလောက်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရသင့်တာပဲလေ... အခုက ဘာပဲကူးကူး ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ??????
8 [Problem] on 17th May 2010, 8:45 pm
writer ကျနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အစ်ကို။ burn ရင် speed ကို 16x လောက်ပဲထားပြီးကူးကြည့်ပါလား။
ဒါမှမဟုတ်စက်ကြောင့်လို့ထင်ရင်တခြား writer တစ်လုံးလောက်ကို အဲသည်စက်မှာတပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါလား။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: CD write problem [Problem] on 17th May 2010, 9:21 pm
topic ကတော့မချော်သေးဘူး... ဒါပေမယ့် ငါမေးရင်ချော်တော့မယ်နဲ့တူတယ်... ဟိုလေ... တစ်ချက်လောက် သိတဲ့သူများရှင်းပြပေးပါလား.... ခွေကူးရင်ဘာလို့ speed ကို 16 တို့ 24 တို့ 32 တို့နဲ့ထားခိုင်းတာလဲဗျာ.... ပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး... အဲလိုတွေနဲ့မှခွေက ပြန်ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်... နို့မို့ဆိုရင် ကျနော်ခွေစကူးတုန်းက ပြောပြမယ့်သူမရှိတော့ ရမ်းချတာ ခွေ5ခွေလောက်ပါသွားဖူးတယ်... ပျက်တာလေ... ခွေက ကူးပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ရင်ထစ်နေတာ... ကျနော့်မှာ အမြန်ဆုံးနဲ့လည်းမရ... နှေးလည်းမရနဲ့ အဲဒိတုန်းက တော်တော်ခံရတာ...6ခွေမြောက်မှ အပေါက်အလမ်းတည့်တဲ့ဟာကို မှတ်ထားပြီးလုပ်ရတာ... အခုကြုံတုန်းလေး ရှင်းပြပေးပါဦး...
10 Re: CD write problem [Problem] on 18th May 2010, 1:59 pm
ကျနော် လဲ တွေ့ကြုံခဲ့ဘူး ပါတယ်.... Application error လို့ထင်တယ်....
တင်ထားတဲ့ software ကို repair (or) reinstall ပြန်လုပ်ရင်
ကောင်းသွားရော... ကျနော်ဖြစ်တုန်းက ပြောတာပါ.... စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး
ကို WATER ပြောသလိုလုပ်ကြည့်လိုက်..အစဉ်မပြေရင်ကျွန်တော့် ဆီယူလာခဲ့ လုပ်ပေးမယ်..ကိုဘိုစံရေ
11 Re: CD write problem [Problem] on 19th May 2010, 4:09 pm
အကုန်လုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . ကျွန်တော် လုပ်တဲ့ဆိုင်မှာက writer (၂)လုံးရှိတယ် . .
ကူးတဲ့ နှုန်းကလည်း (၂၄) x (၃၂) နဲ့ပဲ ကူးတာပါ . . .software 8.0 version ကနေ 6.0 version ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပီးပါပီ တော်တော်များများ လုပ်ကြည့်ပြီးပီ . . တစ်ခြားစက်ကိုလည်းပြောင်းပြီး သုံးကြည့်တယ်ဗျာ အဆင်မပြေဘူး . .
writer က ဖတ်တော့ဖတ်တယ် . ကူးတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်နေတယ် . . . နောက်ဆုံးမရရင်တော့ မျက်လုံးလေးကိုပဲ စစ်ကြည့်ရတော့မယ်ဗျ . . . တစ်ခြား သိတဲ့သူများရှီရင် ပြောပြကြပါအုံးဗျာ . . .
12 Re: CD write problem [Problem] on 19th May 2010, 5:52 pm
၀ယ်ထားတာကြာပြီလားမသိဘူး။ တချို့က ကြာရင် Read ပဲရတယ်။ Write မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခုသာ လဲပေတော့ .....
13 Re: CD write problem [Problem]